Mutambo weChingwa Chisina Mbiriso
Mutambo weChingwa Chisina Mbiriso neKutambudzika
48 views #Sacrifice of God #Feast of Unleavened Bread
Ndechipi Chirevo cheKutambudzika kwaJesu Kwaakasangana nakwo kubva paManheru ePasika Kusvika paMutambo weChingwa Chisina Mbiriso?
Sekutsungirira kwakaita Jesu uye akakunda kushorwa, nekuzvidzwa nevanhu, uye kurambwa nevadzidzi vake, uye kutambudzika pamuchinjikwa kuitira vana vake vose vaanoda, nesuwo, tinofanira kutakura muchinjikwa wedu uye totevera gwara raJesu.
Kereke yaMwari Inotevera Upenyu hwaKristu
Kubudikidza neMutambo weChingwa Chisina Mbiriso, tinofanira kurangarira kutambudzika kwaJesu Kristu uye tofunga nezvekutambudzika kwaKristu Ahnsahnghong akauya kechipiri. Kana tikatevera Kristu mugwara rake, tichivonga panguva dzose, Mwari anoshandura Gungwa Dzvuku kuriita mudziyo wenyasha.
“Ipapo Jesu akati kuvadzidzi vake, ‘Kana paine anoda kunditevera, ngaazvirambe, atakure muchinjikwa wake, anditevere. Nokuti ani naani anoda kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana.’ ” Mateo 16:24–25
Ndianiko achatiparadzanisa norudo rwaKristu?
No. of views623
No. of views42